uhlala nabahlali baseTay Ninh
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguThanh Lam
Indlu ehonjiswe kakuhle kunye nezinto eziluncedo zale mihla yayiyilwe ukuba igqithise kwanawona macalulo alindelweyo. Le ndlu yobunewunewu, inika indawo yokuhlala etofotofo enamagumbi e-deluxe afakwe kakuhle. Kunye kunye nobutofotofo bendlu eyenzelwe ukukholisa abathengi, igadi yeziqhamo enobubanzi obungaphezulu kwe-120 m2 iya kuba ngumphunga oluhlaza kwikhaya lakho.
kwindawo entle kakhulu kwiphondo laseTay Ninh. ibekwe eThanh Tan, eTay Ninh. Kukho inzuzo enkulu yokuhamba Apha indlu yam, uya kufumana ilinen yokulala ecocekileyo necocekileyo ecocwa sithi yonke imihla kunye nekhitshi elixhotyiswe kakuhle ukuba unokupheka ukutya okuthandayo. Ngaphezu koko, sibeka ngononophelo yonke into encinci ukuze ihambelane neemfuno zeendwendwe zethu.
Esi sisitalato esihambayo. Inomtsalane, ikhuselekile, igcwele iindawo zokutyela, iikhefi kunye nokuzonwabisa. Kukuhambo lwemizuzu emi-3 ukuya kwilifa lemveli kwaye lulungele izithuthi zikawonke-wonke.
Umbuki zindwendwe ngu- Thanh Lam
I'm Thanh Lam, now I am working for the Vietnamese government, I and my family have 1 apartment and want to share this apartment with many people.
Ndihlala 200m ukusuka ekhayeni lakho ngoko ke ndiza kusebenzisana nawe. kwaye uncedo ukuba uyabuza. Ndijonge phambili ekufumaneni imibuzo yakho eyakhayo. Ungalibazisi ukundithumelela umyalezo